नेकपाको गढ थबाङमा माओवादी केन्द्र विजयी – Everest Dainik – News from Nepal
नेकपाको गढ थबाङमा माओवादी केन्द्र विजयी
रोल्पा, असार १७, बहुचर्चित थबाङ गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्र विजयी बनेको छ । माओवादीका वीरबहादुर घर्तीमगर १ हजार ९ सय ९० मत लिएर गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । उनका निकतम प्रतिद्वन्द्वी स्वतन्त्र उम्मेदवार अमित घर्तीमगरले १ हजार ५७ मत प्राप्त गरेका छन्।
गाउँपालिका उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रकै रामकिरणी रोकामगर १ हजार ९ सय ६९ मत लिएर विजयी भएकी छन् । उनको प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका श्रीकुमारी रोकामगरले ९ सय ६५ मत प्राप्त गरेकी छिन् ।
जम्मा ५ हजार ८ सय ५३ मतदाता संख्या रहेको थबाङमा ३ हजार ६ सय ८२ मत खसेको थियो । विभिन्न चुनावी इतिहासमा बहुचर्चित बन्दै आएको थबाङमा अघोषित रुपमै भएपनि कांग्रेसले स्वतन्त्र उम्मेदवार अमित घर्तीलाई सहयोग गरेको थियो। घर्ती नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता हुन् ।
नेकपाको गढका रुपमा चिनिने थबाङमा माओवादी केन्द्रले आफ्नो शक्ति कमजोर नभएको प्रमाणित गरेको छ।
एक वडा बाहेक सबैमा माओवादी केन्द्र थबाङ गाउँपालिकाको जम्मा पाँच वडामध्ये एकमा मात्र नेकपाका तर्फबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका फर्कबहादुर बुढाले जित हासिल गरेका छन्। उनले ३ सय ५९ मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस बाहेकका चारवटा वडामा भने माओवादी केन्द्रले सम्पूर्ण प्यानल नै विजयी हासिल गरेको छ। जसअनुसार वडा नं. २ मा बसन्त रोकामगर, वडा नं. ३ मा भीमबहादुर रोका, वडा नं. ४ मा उदिम घर्ती र वडा नं. ५ मा गोवर्द्धन घर्तीको प्यानल विजयी भएको जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
दुईखोली गाउँपालिकामा माओवादीको क्लीनस्वीप रोल्पाको दुईखोली गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रले क्लिन स्वीप गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षका साथै ६ वटै वडामा माओवादीको पूरै प्यानल विजयी भएको हो ।
गाउँपालिका अध्यक्षमा निमकान्त डाँगी नेपाली कांग्रेसका झक्कुप्रसाद घर्तीलाई पछि पार्दै विजयी भएका हुन्। माओवादीका हितकुमारी रोकाले निकटम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसकी लक्ष्मी डाँगीलाई पराजित गर्दै गाउँपालिका उपाध्यक्षमा विजयी भइन्। वडाहरुमा पनि अध्यक्षसहित पूरै प्यानल माओवादीले जितेको छ। वडा नं. १ मा बमबहादुर पुनको प्यानल, वडा नं. २ मा हरिप्रसाद घर्तीको प्यानल, वडा नं. ३ मा झपिराम डाँगीको प्यानल, वडा नं. ४ मा दलबहादुर बुढाको प्यानल, वडा नं. ५ मा सुकबहादुर बुढा र वडा नं. ६ मा भानसिंह बुढामगरको प्यानल विजयी भएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
सुनछहरी गाउँपालिकामा पनि माओवादी विजयी पूर्वी रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रले विजयी हासिल गरेको छ। माओवादीका तर्फबाट गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवारको रुपमा रहेका आशबहादुर पुनले २ हजार ५ सय ६१ मत प्राप्त गरी विजयी भएका हुन्। पुनका प्रत्यासी कांग्रेसका दूर्गे बुढाले १ हजार १ सय ३६ प्राप्त गरेका छन् ।
गाउँपालिका उपाध्यक्षमा माओवादीका पवित्रा घर्तीमगर विजयी भएकी छन्। उनले २ हजार ३ सय २० मत प्राप्त गरेका छन्। उपाध्यक्षका प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसकी सरु पुनले १ हजार १ सय ४१ मत प्राप्त गरेकी छिन्।
ट्याग्स: Rolpa, Second Phase Election Result